Par Taratra sur 21/09/2018
Nitrangàna lozam-pifamoivoieana ny tao Ambodimadiro Antsakoabe (RN6), ny alarobia lasa teo. Nandeha mafy, tao anaty fiolahana, ny fiara 4×4 iray, hany ka nivadika. Vokany, dimy ny naratra ka iray no tena mafy. Samy nentina tany amin’ny toeram-pitsaboana ao amin’ity kaominina ity ireo niharam-boina ireo.
Lozam-pifamoivoizana ihany koa no nitranga, tany Miantsoarivo Antranoroa, any amin’ny distrikan’i Soavinandriana, ny alarobia teo hatrany. Niezaka nisavika traktera, teny am-pandehanana, ny lehilahy iray, saingy nibolisatra ary nitontona mafy tamin’ny tany. Izay no nitarika ny fahafatesana, teo noho eo.
Nisehoana vonoan’olona kosa tany amin’ny toerana antsoina hoe Fotivolo any Ankazoabo atsimo, ny talata teo. Dahalo telo no nitifitra lehilahy iray, avy eo, lasa nitsoaka, nanaraka ny lalana ao Ampamaha. Mahagaga ihany ity vonoan’olona ity, satria tsy naka na inona na inona ireo olon-dratsy. Mitohy ny fikarohana ireo nahavanon-doza.